Muqdisho: Qodobadda ay Ku Heshiiyeen Farmaajo iyo Rooble | Gabiley News Online
October 22, 2021 - Written by admin
Khilaafkii ka dhex taagnaa madaxweynaha iyo raysal wasaaraha Soomaaliya ayaa la sheegay in xal laga gaadhay.
Kadib dhex dhexaadin uu maalmahanba labadda masuul ka dhex waday madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur galbeed C/casiis Lafta Giriin, waxaa xalay la shaaciyay qodobo ay madaxweyne Farmaajo iyo raysal wasaare Rooble ku heshiiyeen.
Qodobadda heshiiska ee lagu soo af-jaray khilaafka madaxda dawladda Soomaaliya ayaa ka koobnaa kix qodob.
Waxaanay u dhignaayeen sidan:
1. Iyada oo la tixgilinayo dib udhaca kuyimid jadwalka doorashooyinka ayaa madaxdu waxay isku raaceen in la dar dargeliyo howlaha doorashooyinka, waxeyna ugu baaqeen dawladaha xubnaha ka ah Dawladda Federaalka Soomaliya in ay sida ugu dhaqsaha badan ku bilaabaan usbuucyada soo socda doorashada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
2. In si dhaw ay u wada shaqeeyaan hay’adaha Amnigu iyaga oo xoogga saaraya adkaynta amniga iyo xasilloonida guud ee dalka xilligan xaasaasiga ah ee dalku ku jiro doorashooyinka, Lana xoojiyo ladaagallanka argagaaxisa ee Alshabaab.
3. In Wasiirka Aminiga Cabdullaahi Maxamed Nuur uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka.
4. In Janaraal Bashiir Goobbe loo magacaabo Wasiiru Dowle.
6. Madaxda ayaa isku raacay in Yaasin Cabdullaahi Maxamuud (Farey) uu ahaado kusimaha Taliyaha hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (HNSQ) inta Madaxweynahu uu soo marsiinayo Ra’iisul Wasaaraha Taliye iyo Taliye kuxigeen kadibna La soo marsiinayo Golaha Wasiirrada, si madaxweynuhu ugu soo saaro digreeto.
6. Madaxda ayaa isku raacay in kiiska Ikraan Tahliil Faarax loo daayo hay’adaha caddaaladda iyo garsoorka, waxaana la faray hay’adaha amnigu in ay gacan ku siiyaan.
Ugu danbayn, madaxda qaranku waxay umahad celiyeen Madaxweynaha Dowladgoboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) iyo masuuliyiinta kale ee u dhabar adaygay sidii madmadowgii madaxda qaranka ka dhex jirey loogu dhammeyn lahaa Isfahan iyo afgarad, doorashaduna u socoto si habsami leh.
Madaxda waxa ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed sida ay uga xun yihiin walwalkii ay dareemeen maalmihii la soo dhaafay iyaga oo u ballanqaaday shacabka in si midnimo leh ay uga wada shaqayn doonaan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho hufan loona adkayn lahaa amniga guud ee dalka.